Siokantsera Momba an’i Bin Laden: Nanjary Olotsotra Mpitati-baovao ny Mpanao Gazety Amerikana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, русский, عربي, English
Raha niparitaka ny vaovao mikasika ny nahafatesan'i Osama bin Laden ny 2 May 2011 lasa teo, nisikoantsera sy nampiasa valantserasera tahaka ireo olon-tsotra ihany koa ireo mpanao gazety tao Etazonia mba hilazalaza ny heviny sy izay hitany teny an-dàlana na koa teny an-habakabaka. Manamarika ny fahasamihafana mahaliana izany raha notaterina ny andron'ny 9/11 izy ihany tamin'ny taona 2001, raha mbola teknolojia vao nirongatra ny valan-tserasera tamin'izany, indrindra teo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety matihanina. Nanjary olo-tsotra mpitatitra vaovao ihany izany ny mpanao gazety?
Ed Henry ao amin'ny CNN ni-tweet ny sahoby teo anoloan'ny Lapa-panjakana “Trano Fotsy” ao Washington D.C.
@edhenrycnn: ny horakoram-pifaliana aoriako ivelan'ny Trano Fotsy mahatonga ahy te-hitomany. wow. #binladen
Mpanao gazety sady mpaka sary Thomas Cain, avy amin'ny fikambanana orinasa vaovao eto an-toerana, Main Street Connect nisiokantsera ny andro nahatongavany tao amin'ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy ao New York City ny 2 May.
@ThomasCain: Vao tonga tao John FKennedy ary niteny teo amin'ny fanamafisam-peo ny mpanamory nampandre anay ny fahafatesan'i bin laden. Nanjary nitehaka avokoa ny tao amin'ny fiaramanidina rehetra!
@ThomasCain: Sary: Mpandeha tao amin'ny toerana fangalana entana ao JFK tafaraikitra nihaino ny kabarin'i Obama momba ny fahafatesan'i Bin Laden.http://t.co/SXDhq0K
Jim Forman avy ao amin'ny ekipa KING 5 Night ao andrefan'i Washington ni-tweet koa izay niainany tao amin'ny fiaramanidina:
@jimformanKING5: vehivavy maty vady noho ny 9/11 tao amin'ny zotram-piaramanidinako. Latsa-dranomaso. Nampaherezin'ny mpiray efitra iray manontolo. Efa novain'ny fiainana ny fijeriny ny zava-nitranga.
@jimformanKING5: Ho an'ireo lehibeko. Nandà tsy hiseho amin'ny fahitalavitra androany alina ilay vehivavy mahafinaritra izay namoy ny vadiny ary mananjanaka roa. Nahazo toerana avy amiko izy.
Tsy ny zavatra niainana rehetra tao amin'ny seranam-piaramanidina Amerikana no mampitsamboamboatra, fa mihahenjana ny fiarovana.
@tmsruge: Fahafatesan'i OBL= “Dingana” manokana miavaka teo amin'ny fisavana. Ny “dingana” tiako lazaina amin'izany tena matevimbe ny manjelanjelatra sy ny mivotra amin'ny hajian'ny pasipaoro
Ao New York ao amin'ny “Ground Zero” toeran'ny World Trade Center taloha, nitatitra ny hafaliam-bahoaka ny mpanao gazety.
New York Times valan-tserasera mpamoaka vaovao, Lexi Mainland ni-tweet hoe:
@lexinyt: Vao tonga tao ” ground zero”, naneno mafy sy nirefotra mafy ny anjombona ary nirohotra ny horakora-pifaliana.
@lexinyt: Ny tovolahy izay vao avy nisiokantsera ny sariny dia niaina ny 9/11 tao NYC tamin'ny andro voalohany nidirany tamin'ny sekoly ambony, tao Manhattan.
Matthew Bishop, lehiben'ny birao ao New York amin'ny The Economist dia nisiokantsera koa hoe.
@mattbish: Eto koa ny lehilahy miaraka amin'ny vuvuzela, tahaka ireo olo-tsotra tia mampita vaovao an-jatony!
@mattbish: Hojereko sy ho tsaroako hatrany ireo vahoaka nianjera hatreny ambonin'ny habakabaka, izay nianjera teo amin'ny toerana nitsanganako . Mbola tsara ny fitadidiako
Mpanoratra sy mpiasan'ny New York Times Jennifer Mascia nilaza hoe:
@jennifermascia: Tsy mampino ny fahatanoran'ireto olona vory. Fotoana nanamarika ny fiainany mihitsy angamba ny 9/11.
Ny ampitso maraina tao New York, nitantara ny diany tao amin'ny Ground Zero i Jeff Jarvis, bilaogera za-draharaha sy iray amin'ireo mpanao gazety voalohany nitatitra ny tohin'izay nitranga taorian'ny fipoahan'ny World Trade Center:
@jeffjarvis: Niverenako indray ny lala-nodiaviko tamin'ny 9/11. Nihahitako kokoa ny zavamisy avy amin'ny tsiaroko momba ny tanàna.
Tao amin'ny bilaoginy, Buzz Machine, no nanoratany fahatsiarovana mampihetsi-po nahatonga ny 9/11 ho namaritra ny asany ho mpisolovava tsy mivena ny fitaovam-pampitan'olo-tsotra vaovao sy ny fampitana mihitsy moa izany:
Raha vao nahita ny vaovao aho, nitodika tany amin'ny Twitter ny saiko. Twitter no Kianjan'ny Fotoana [Times Square] amin'ity androm-pandresena ity. Mpitatitra vaovao no nanontany ahy androany alina raha fotoana goavana ho an'ny Twitter izao. Angamba, hoy aho. Androany ny fifampizarantsika traikefa manodidina ny zava-misy ka tsy ho faritana intsony fa toy ny mijery fahitalavitra isika rehetra. Ankehitriny, aoriana ny fahitalavitra. Twitter kosa ahafahan'ny ankamaroantsika mahita vaovao misongadina sy mifampizara ny hevitra sy ny fihetsehampo.